Fanampiana voalohany ~ Journey-Assist - Ahoana raha ...
Pejy fandraisana » Torohevitra mahasoa Travel » Ny fanampiana voalohany
Mba hampangatsiahana ny hoditra dia ampiharina ny andiana lamba natsipy anaty rano mangatsiaka. Ny fitsaboana ny rehydration dia natao koa - mila tratran'ny rano kely kokoa ilay niharan-doza. Mety mineraly na rano tsotra izy io. Raha ny rahona matevina, dia ilaina ny mitsofoka amony. Misy dikany ny itondrana tapa-landihazo lena miaraka amin'ny amonia ao amin'ny oron'ilay niharam-boina, na manapoka azy amin'ny whisky.
Avy eo dia tokony hesorina ny fanaintainana sy ny fihenanana. Ny fanafody tsara indrindra ho an'ity dia ny crème na gel misy hydrocortisone, izay mampihena edema. Ny fanaintainana dia azo esorina amin'ny fanampian'ny zava-mahadomelina sy ny menaka ampiasaina amin'ny fitsaboana ireo bibikely bibikely. Ohatra, gels mahomby amin'ny antihistamine sy hetsika fanoherana ny fanaintainana dia Fenistil-gel sy Psilo-balm.
Tokony hisotro tsiranoka be dia be ilay lasibatra